Ɛnnɛ yɛreka nsakraeɛ, nnoɔma foforɔ ne agyedeɛ ho asɛm. – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Ɛnnɛ yɛreka nsakraeɛ, nnoɔma foforɔ ne agyedeɛ ho asɛm.
Bere a color tv no puei wɔ Italy wɔ 1970 mfe no mu no, mpɔtam hɔ atumfoɔ no twaa TV dodow no ara mu kae sɛ wɔanyɛ sɔhwɛ a ɛdɔɔso na ebetumi apira wɔn a wɔhwɛ no. Ebia na wɔteɛ, ebia na ɛnte saa. Asɛm no ne sɛ na ɛyɛ mfiridwuma a ɛhaw adwene a aban no bɔɔ mmɔden sɛ ɛbɛhyɛ ho mmara esiane sɛ wɔante ase nti.
Nhwɛso foforo ne intanɛt.
First considered a “passing fad” , afei massively gye tom wɔ obiara a ɔwɔ smartphone anaa laptop wɔ asɛmfua no nyinaa mu.
Mekae sɛ Bill Gates wɔ nsɛmbisa mu wɔ David Letterman Show mu sɛ wɔyɛɛ no ​​fɛw ɛfiri sɛ na ɔrekyerɛkyerɛ deɛ intanɛt yɛ ne sɛdeɛ ɛbɛsesa wiase no mu.
Bill: “[Intanɛt] rebɛyɛ beae a nkurɔfo betumi atintim nsɛm […], de kɔmputa so email amena…”
Obisabisaa nsɛm: “asram abien a atwam ni no, wɔde dawurubɔ kɛse bi a ɛyɛ nwonwa bae sɛ wɔ intanɛt so […] wɔrebɛbɔ baseball agoru bi ho dawuru […] na misusuwii kɛkɛ wɔ me tirim sɛ “so radio bɔ dɔn?” “…..
Bill: “Wubetumi atie bere biara a wopɛ”
Obisabisafo: “So mfiri a wɔde kyere nsɛm gu kasɛt so bɔ dɔn?”
… ne nea ɛkeka ho. Nokwarem no, na ɛyɛ yaw sɛ wobɛhwɛ, nanso na Bill reserew. Ɛnyɛ ne nkyɛn, na mmom ne nkyɛn.
Wunim baabi a mede eyi rekɔ, nanso mepɛ sɛ mema emu da hɔ pefee.
Mifi ahobrɛase mu gye di sɛ bere biara a nneɛma foforo akɛse bɛka ho no, ehu ka nkurɔfo.
Nkurɔfo bɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛbɔ tebea a ɛwɔ hɔ no ho ban efisɛ “nsakrae” ma nkurɔfo hu. Nnwuma a yɛbɛsesa, afie a yɛbɛsesa, ahokafoɔ a yɛbɛsesa (lol) yɛ atenka a ɛyɛ hu ɛfiri sɛ wɔayɛ yɛn nhyehyɛeɛ sɛ yɛbɛhwehwɛ ahobanbɔ na yɛatena yɛn ahotɔ beaeɛ.
Sɛ yɛn nananom nya ɔbodan pa, a aduan fibea pii wom a, na enhia sɛ “wofi wɔn ahotɔ beae” na wɔne agyata binom ko na ama wɔanya wɔn aduan a edi hɔ no.
Nsakrae yɛ hu na ɛyɛ den sɛ wobɛte saa mfiridwuma yi ase. Nnipa binom rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛte ase, nanso nokwarem no ɛyɛ den sɛ hell. Mewɔ saa ahunmu yi mfeɛ pii na meda so ara resua nneɛma foforɔ da biara da.
New consensus mechanisms, different types of blockchain, validators, delegators, miners, has rate, incentives, oracles, etc etc. Dodow a wusua no dodow no ara na wopɛ sɛ wusua na wuhu sɛ pii wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wusua.
Eyi kyerɛ sɛ nnipa dodow no ara bɛbɔ no brush kɛkɛ efisɛ wɔmpɛ sɛ wɔde amemene mu tumi bedi dwuma de ate ase.
Ma mennya eyi tẽẽ: ɛyɛ OK koraa sɛ wompɛ sɛ wusua. Minnim sɛnea emails yɛ adwuma na nanso mede di dwuma da biara da.
Minnim sɛnea intanɛt no yɛ adwuma ankasa na nanso, bio, mede di dwuma da biara da.
Saa ara na telefon so frɛ, text message, TV, ne nea ɛkeka ho.
Ɛno akyi no, egye bere na woatumi ayɛ mfiridwuma foforo ho su na ɛno nti na nkurɔfo ho dwiriw wɔn no.
Nnipa dodow no ara bɛbɔ no brush kɛkɛ efisɛ wɔn ani nnye nea wɔnte ase ho, kosi sɛ wobehu sɛ wobetumi afi ase de mfiridwuma no adi dwuma a wonnim nea ɛwɔ akyi ankasa.
Migye di sɛ yɛda so ara yɛ ntɛm. As of today it’s pretty hard for the average user to setup a wallet, write down the seed phrase, de ne ho hyɛ decentralized sikasɛm protocols mu, $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, afei hwehwɛ staking provider a ɛfata, afei ɔde token ahorow bɛmena ntam sika kotoku ne nea ɛkeka ho.
Sɛnea ɛte mprempren no ɛnyɛ nea wɔahyɛ sɛ ɛbɛma nnipa ɔpepepem pii ani agye ho, na eyi yɛ ade pa. Ɛyɛ ade pa efisɛ sɛ nnwumakuw fi ase de wɔn adwene si adetɔfo a wɔde wɔn ho to so ne osuahu so a, obiara bɛpɛ sɛ ɔyɛ ne fã.
Wɔbɛwo nnwumakuw foforo wɔ blockchain no so, wɔde nnwuma foforo bɛma. Web3 nyinaa fa tumi a yɛbɛdan afi nnwumakuw akɛse mu akɔ wɔn a wɔde di dwuma no so na ɛrekɔ so wɔ yɛn ani so pɛɛ.
$BTC ne $ETH nyɛ afe 1 sika a wɔde bɛto mu. Saa mfiridwuma yi bɛsesa wiase sɛnea yenim no na wobenya ɔsɔretia afi nnipa koro no ara a wonya mfaso kɛse fi wiase a egyina inflationary fiat so no hɔ.
Mewɔ ɔpɛ sɛ mɛdi gua na mede sika ahyɛ crypto a yɛadi kan aka ho asɛm no mu wɔ mfeɛ du a ɛreba no mu na ebia mpo ɛboro saa.
Sɛ yɛreka eyi nyinaa a, ɛnyɛ crypto biara na ɛyɛ pɛ, sɛnea ɛnyɛ stock biara na ɛyɛ pɛ no ara pɛ.
Sɛ wode BTC toto TurtleCoin ho a, ɛte sɛ nea wode $TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) toto Theranos ho. Na biribi wɔ hɔ a enti Theranos nni ticker.
3 gatly enjamlaşdyrylan, kaka şlýapa, stol matasy, çagalar maskasy, magnit, beýsbol şapkasy, syçanjygy, it matasy, öý haýwanlary, öý ýorgan, pişik matasy, işjeň futbolka, beýsbol le ýeňli futbolka, nusgawy futbolka , Grafiki futbolka, ýeňil eşik, ýeňil köýnek, uzyn ýeňli futbolka, uzyn futbolka, premium futbolka, pullover kapot, pullover köýnek, ýaryş meýdançasy, ýeňsiz ýokarky, möhüm futbolka, tankyň üstü, üçlügi -Blend futbolka, V-Boýn futbolka, Zipli Hoodie, A-Line köýnek, Şiffon Top, Gurnalan Futbolka, Gurnalan Futbolka, V-Boýn Futbolka, Grafiki Futbolka Köýnegi, Aýakgaplar , Mini yubka, Premium Scoop futbolka, rahatlandyrylan futbolka, stiker, ýalpyldawuk stiker, noutbuk derisi, noutbuk ýeňi, aç-açan ýelmeşiji, iPad deri, iPad Snap Case, iPhone Skin, iPhone Snap Case, iPhone Soft Case, iPhone Tough Kase, “iPhone gapjyk”, “Samsung Galaxy Skin”, “Samsung Galaxy Snap Case”, “Samsung Galaxy Soft Case”, “Samsung Galaxy Galaxy Case”, “Art Board Print”, “Art Print”, “Canvas” çap edilen çap
Tags: AEDAFNAl Algerir Dinaralbán lekaltcoinaltcoinsAMDANGAngolan KwanzaAOAArgentina PesoARSAruban FlorinAUDAWGAwstraliýa DollaryAzerbaýjan ManatAZN . . Kanada dollaryBraplanan BTCCDFCFA Franc BCEAOCFA Franc BEACCFP FrancCHFÇili hasap birligi (UF)Çili PesoCLFCLPCNYCOPCRCDemirgazyk Koreýa ýeňijiEfiopiýaly Birrefirefiumememen RialERERErmenistan DrametETBEUREýran RialFijian dollaryFilippin PesoFJDFKPFolklend adalary funtGambiya DalasiGana CediGazagystan TengeGBPGELGemini ABŞ dollaryGHSGibraltar Pound . Wengriýaly ForintGollandiýa Antillean GuilderGünorta Afrika RandGünorta Koreýa ýeňijiGyrgystani SomHEMMESIHindi RupeHorwatiýa KunaHytaý ýuanyIDRILSIndoneziýa RupiahINRIordaniýa DinarIQDIRRISKIslandiýa KrónaJamaamaýka DollaryJapaneseaponiýa YenenJEPJersi PoundJMDJODJorjiýa LariJPYKatar RialKeniýa ŞillingKESKeýman adalary dollaryKeýp Werdean EskudoKGSKHRKMFKolumbiýaly PesoKomor frankyKongo frankyKosta Rikanyň KolonyKPWkriptokripto walýutakriptografiýa lar FuntKRWKümüş (Troýa unsiýasy)Kuweýt DinarKWDKYDKZTLAKLaotian KipLBPLesot ho LotiLiberiýa dollarylitecoinLiwan PoundLiwiýa DinarLKRLRDLSLltclydMADmagdançylykMakanese PatacaMakedoniya DenarMalagasy AriaryMalawian KwachaMalaýziýa RinggitMaldivian RufiyaaMarokko DirhamMawritaniýa OuguýaMawritaniýa Rupeýa Pesomaýa goýumMGAMKDMMKMNTMoldowan Leumongol tugrikMOPMozambik MeticalMRUMURMVRMWKMXNMyanma KyatMYRMZNNADnagtNamibiýa dollaryNepal RupisinerdNGNNigeriya NairaNikaragua KordobaNIONOKNorwegiýa KroneNPRNZDOmani RialOMROwgan Owganystanyozewro zonasy EuroewroPABPakistan RupeePanamanyň BalboaPapua Täze Gwineýa KinaParagwaý GuaraniPAXPaxos Standard USDPENPeruw Nuevo SolPGKPHPPKRPLNPolşa ZlotyPound SterlingpulPYGQARrippleromán LeuRONRSDRuanda frankyRUBRus rublyRWFSalwadoran KolonSamoan TalaSan Tomé we Prinsipe Do braSankt Helenaelena Poundsarsatoshisatoshi nakamotoSaud RiýalSBDSCRSDGSEKSerbiýa DinarSeýşello RupiSGDSHIBShiba InuSHPSierra Leone LeoneSingapur DollarySiriýa funtySLLSomali şillingiSOSsöwdasöwdagärSRDŞri-Lankanyň rupisiSTNSudanyň funtySüleýman adalary dollarySurinam dollarySVCSwazi LilangeniŞwesiýa KronaŞweýsariýa frankySYPSZLTäjigistan SomoniTanzaniýaly ŞillingTaý BahtTäze Taýwan dollaryTäze Zelandiýa dollarytegelek USD teňňesiteňňeteslatesla hereketlendirijileriTHBTJSTMTTNDTongan Pa? AngaTOPTrinidad we Tobago DollarTRYTTDTúnis dínarTürk LiraTurkmenistan ManatTWDWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYrak DinarYsraýyl ŞekelZambiya KwachaZARZimbabwe DollaryZMWZWLZZ WBTC
June 12, 2022 by admin Two - Mmienu 0
Un par de explosións alcanzou a cidade de Beirut
Sot po flasim për ndryshim, risi dhe adoptim.
Next Сьогодні ми говоримо про зміни, інновації та прийняття.
Previous Bu gün üýtgeşiklik, täzelik we ogullyga almak hakda gürleşýäris.